दर्शकले नेपाली फिल्मलाई नै माया गर्छन् : अनमोल केसी | Nepal Ghatana
दर्शकले नेपाली फिल्मलाई नै माया गर्छन् : अनमोल केसी
प्रकाशित : १३ चैत्र २०७८, आईतवार १५:११
अभिनेता अनमोल केसी अभिनित फिल्म ‘ए मेरो हजुर ४’ आगामी बैशाख १ गतेबाट नेपाल भरका फिल्म हलहरुमा रिलिज हुँदैछ । सोही मितिमा दक्षिण भारतीय फिल्म ‘केजिएफ च्याप्टर २’ पनि आउँदै छ ।
दक्षिण भारतीय फिल्मको दबाबका बावजुद नेपाली बक्सअफिसमा राम्रो व्यापार गर्नु पर्ने चुनौती ‘ए मेरो हजुर ४’ लाई छ । यस्तो अवस्थामा दर्शकलाई हलसम्म तान्ने मामिलामा झरना थापा निर्देशित फिल्म कति सफल हुनेछ ? अनमोल केसीको स्टारडम कत्तिको अब्बल रहला ? भन्ने चर्चा नेपाली फिल्म बजारमा सुरु भएको छ ।
फिल्मको ट्रेलर रिलिज कार्यक्रममा निर्माता सुनिल कुमार थापाले बैशाख १ गते नेपाल र भारतबीच फुटबल म्याच जस्तै फिल्म रिलिजको खेल रहेको बताए । निर्माता थापाको यसो भनि रहँदा फिल्म मुख्य अभिनेता अनमोल केसी खुसी र आत्मविश्वासी देखिए । वैशाख १ गतेको बक्स अफिस भिडन्तलाई अनमोलले नेपाल भर्सेस भारतविरुद्धको फुटबल खेलमा नेपालले बाजी मार्ने उल्लेख गरे ।
अनमोलले कोराना महामारी अगिाडी रिलिज भएको फिल्म ‘क्याप्टेन’को मुख्य पात्र इशान खड्काको नाम लिएर भने-‘यो लडाइँ नेपाल र भारतको फुटबल म्याचजस्तै हुनेछ । डराउनुपर्ने कारण छैन । नेपालसँग क्याप्टेन ईशान खड्का छ । फिल्ममा इशान खड्का नेतृत्वको नेपाली टोलीले खेलमा भारतलाई जितेको कथावस्तु क्याप्टेनमा छ ।
फिल्मको उक्त पात्रको भूमिका अनमोलले निर्वाह गरेका छन् । घुमाउरो ढंगमा अनमोलले बक्स अफिस खेलमा समेत भारतीय फिल्मलाई हराउन आफु सक्षम रहेको संकेत गरे । उनको यस्तो अभिव्यक्तिमा पत्रकारले आत्मविश्वास की स्टारडमको घमण्ड ? भनेर प्रश्न गरेका थिए ।
पत्रकारको पश्नको जवाफ दिँदै अनमोल भने, ‘दर्शकको माया नेपाली फिल्मलाई रहने भन्दै डराउनुपर्ने कारण नभएको सुनाए ।’ अर्को एक प्रश्नमा अनमोलले ए मेरो हजुर ४ युवापुस्ताले नाक खुम्च्याउनुपर्ने फिल्म नबनेको भन्दै ‘फ्यान्टास्टिक फिल्म बनेको छ,’ उनले भनाई छ ।
झरना थापाद्वारा निर्देशित फिल्मको कथा पनि झरना स्वयंमले नै लेखेकी हुन् । सुहाना इन्टरटेनमेन्ट र सुनिल कुमार थापा प्रोडक्सनमा सुनिल कुमार थापाले निर्माण गरेका हुन् । पटकथा र संवादमा उनलाई स्व. निर्देशक छेतेन गुरुङ, मन्दिप गौतम, प्रतिक पौडेल, बाबुराम दाहाल, उपकार पाण्डे र माधव शर्माले सघाएका छन् ।